Ny Forum momba ny fizahantany Mekong 2018 dia misokatra ao Nakhon Phanom
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Ny Forum momba ny fizahantany Mekong 2018 dia misokatra ao Nakhon Phanom
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Jona 28, 2018
Ny minisitry ny fizahantany any Thailande HE Ittipol Khunpluem dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa ny fivoriambe fizahan-tany faha-21 ao Mekong dia natokana ho an'ny mpanatrika 2018 eo ho eo ao amin'ny tanàna amoron'ny renirano Nakhon Phanom, Thailand.
Tsy misy vahiny amin'ny fizahantany HE Ittipol Khunpluem no ben'ny tanànan'i Pattaya teo aloha ary notendrena ho minisitry ny fizahantany tamin'ny volana aprily 2018.
Ity hetsika fanao isan-taona ity dia manintona ireo mpanapa-kevitra amin'ny fizahan-tany avy amin'ny firenena enina amin'ny faritra Greater Mekong Sub-faritra ary tanterahina ny 26 hatramin'ny 29 Jona ao amin'ny oniversite Nakhon Phanom miaraka amin'ny lohahevitra 'Transforming Travel - Transforming Lives. MTF 2018 dia notantanan'ny fiaraha-miasa tamin'ny Birao Mpandrindra ny fizahan-tany ao Mekong (MTCO).
Ny iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny forum tamin'ity taona ity dia ny fomba fiasa vaovao, miaraka amina fotoam-pivorian'ny fihaonambe miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina ao an-tanànany, eo ambanin'ny atrikasa paikady valo misy lohahevitra:
• fizahan-tany momba ny sakafo
• fizahan-tany fizahan-tany
• fizahantany momba ny fahasalamana
• fizahan-tany ara-pivavahana
• fizahan-tany lova
• fizahantany ara-tontolo iainana
• fizahan-tany amin'ny festival
• fizahan-tany biolojika
Ireo dia hatao any amin'ny vohitra misy foko valo manodidina an'i Nakhon Phanom miaraka amin'ireo manam-pahaizana isam-paritra. Amin'ny fitsidihana sy fiaraha-mientana amin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana dia manantena ireo mpikarakara fa afaka mifampiresaka ireo solontena sy ny mponina ka "Transforming Travel and Transforming Lives" no lohahevitry ny MTF2018. Ho andrana tsy manam-paharoa izy ary andrasana fatratra.
Ny programa ho an'ny MTF 2018 dia misy fizarana telo miavaka amin'ity taona ity. Nanomboka tamin'ny fotoam-pivoriana 'Transforming Travel' omaly, nitady ny mety hanovana ny dia sy ny fiainan'ny olona. Ny fanolorana lahateny faharoa an'ny mpitantana ambony izay misolo tena ny sehatra fitsangatsanganana samy hafa dia natao androany miaraka amin'ny adihevitra mafana momba ny fampihenana ny plastika tokana ampiasaina ao amin'ny GMS notontosain'i Khiri Reach. Ny fotoam-pivoriana lohahevitra fahatelo izay karakarain'ny fiarahamonina eo an-toerana dia hatao ny tolakandro.
Talohan'ny fisokafana tamin'ny fomba ofisialy dia nisy hetsika roa nampidirina tao, anisan'izany ny Fihaonamben'ny Start Start in Tourisme (MIST) ao Mekong sy ny Fetiben'ny horonantsary Mekong Mini. Fahadisoana tato an-tsaiko ny fanapaha-kevitra hanasaraka ireo zava-nitranga ireo tamin'ny votoatin'ny 'ofisialy', izay nanala ny lanjan'izy ireo. Nisy nanatrika tsara izy ireo, niteraka fifanakalozan-kevitra fotsiny fa koa ny fahalianana ara-barotra.
Ny minisitry ny fizahantany any Thailande HE Ittipol Khunpluem niresaka tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety niaraka tamin'ny Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Birao Mpandrindra ny fizahantany Mekong (ankavia)
Hofaranana amin'ny fitsidihana aorian'ny 2018 Jona ny MTF 29, ahitana ny fitsidihana ireo mari-toerana Buddhist manan-danja ao Nakhon Phanom, Wat Phra That Phanom, ary ny fitsangatsanganana afovoan-tanàna.